PISAREMA 70 zvinoreva vhesi nendima | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero PISAREMA 70 zvinoreva vhesi nendima
PISAREMA 70 zvinoreva vhesi nendima
Dai 1, 2020
Ngatidzidzei bhuku raPisarema 70, zvinoreva kubva pandima kusvika pandima nhasi. David anokumbira kungonunurwa kwake uye kutsiva kwevavengi vake. Saka zvakare, isu tinogona kushandisa iyi pisarema kutsvaga kumeso kwaMwari kwekununurwa uye kururamiswa.
Kana tikanyatsoongorora ndima 1-5 dzePisarema 70, David akanamatira kukurumidza kuparadzwa kwevakaipa, uye kuchengetedzwa kwevanonamata. Pisarema iri rinenge rakafanana nendima shanu dzekupedzisira (Mapisarema 40). Tichiri pano, tinoona Jesu Kristu akatsanangurwa muhurombo nekutambudzika. Tinomuonawo achipa chirango chakarurama uye chinotyisa pavavengi vake vechiJuda, vechihedheni, nevanopikisa chiKristu; uye achiteterera mufaro uye mufaro weshamwari dzake, kukudzwa kwaBaba vake. Ngatiisei zvinhu izvi kumatambudziko edu, uye nenzira yekutenda, uzviunze, nezvikonzero zvezvivi, pakurangarira kwedu. Miedzo yekukurumidza inofanira kugara ichimutsa minamato yemwoyo wese.
Bhuku rePisarema 70 rinenge munamato wekununurwa kubva kuvavengi. Kuziva zvishoma nezvePisarema iri, ngatitorei kudzidza ndima imwe mushure meimwe.
Zvinorehwa nePisarema 70 Ndima neVesi
Ndima 1: Kurumidzai, Mwari, kuti mundirwire; kurumidzai kundibatsira, Jehovha
Mutsara wekuti, "kurumidza," wakatorwa kubva muchikamu chinotevera muna (Mapisarema 40:13). Iwo unoti, "Farai, Ishe," kana "Jehovha." “Kurumidzai kundibatsira, O Ishe (ona chinyorwa paPisarema 22:19). Tinoona David ari muchimbichimbi nemunamato wake. Nguva zhinji tinonzwa kuti Mwari haana kunzwa munamato wedu, nekuti hatipindurwe nekukasika.
Ndima 2: "Ngavanyadziswe uye vanyadziswe avo vanotsvaga mweya wangu; ngavadzokere shure, vanyare, ivo vanoshuva kundikuvadza." Muna Mapisarema 40:14, inowedzerwa, “Pamwechete” (ona chinyorwa paPisarema 40:14). Dhavhidha akavimbiswa kuti pavakaramba vachishusha, ivo vava pedyo nekuparadzwa, uye iye aive pedyo nekununurwa kwake. "Vanotsvaga mweya wangu": Kana kuti "hupenyu." Muna (Mapisarema 40:14), inowedzerwa, “Kuuparadza,”; nekuti ndiwo mhedzisiro yekutsvaka kwavo. "Ngavadzokere shure": (ona chinyorwa paPisarema 40:14). David arikukumbira Ishe kuti aite kuti vanhu vari kuedza kumuparadza, vanyadziswe. Izvi zvinoita sekunge David arikuti, handikwanise kuvaratidza, asi iwe uvaratidze kwandiri. Ishe, itai kuti vanyadziswe pachavo nekuda kwekurwisa mumwe wenyu.
Ndima 3: Ngavadzoserwe mubairo wekunyadziswa kwavo vanoti, Hekani, hekani!
Muna Mapisarema 40:15 ndizvo, “Ngavave dongo”; izvi maererano nenyika yavo nedzimba, (ona zvinyorwa paPisarema 40:15). Naizvozvi, tinodzidziswa kuti tisaseke vamwe mukusuwa kwavo, kuti zvimwe izvo zvingave zvichawira pamutsipa wedu. "Zvinodaro": Muna Mapisarema 40:15, inowedzerwa, "kwandiri,"; kwete kuvanhu vake, asi iye amene. “Aha, haa”: Kufara padambudziko rake nekutambudzika. Mubairo wavo pazuva rekutongwa ichava kurohwa kusingaperi. Izwi rinoti (aha, aha), rinoshandiswa nevateveri vaDhiabhori. Izvi zvinongoratidza kuti ndivanaani.
Ndima 4: Vose vanokutsvakai ngavafarise vave nomufaro mamuri; Vanoda kuponesa kwenyu ngavarambe vachiti, Mwari ngaakudzwe. ”
Mundima yechina yePisarema 70, Mambo David akakumbira kuna Mwari kune avo vanomutsvaka. Mambo David vakanamata kuti Mwari vabatsire ivo vanomutsvaga kuti vakwanise kufara nekufara muna She. Zvakare, rwiyo rwokurumbidza Mwari harufanire kubva pamiromo yavo.
Avo vanotsvaga Mwari vanomuwana. Inozviratidza pamberi, uye inozodzokorora. Avo vakaona Ishe vane zvakawanda zvekufara pamusoro pazvo. Ndivo vakaregererwa, uye ivo vanofanirwa kutaura kudaro. Kurumbidzwa kwaIshe hakufanirwe zvachose kubva pamiromo yevakaregererwa. Mwari ngaakudzwe, kwete nemiromo yedu chete asi nehupenyu hwatiri kurarama isuwo.
Ndima 5: "Asi ini ndiri murombo nomushaiwi; kurumidzai muuye kwandiri, Mwari; imwi muri mubatsiri wangu nomurwiri wangu; Haiwa Jehovha, musanonoka. ”
Ndima yechishanu yakaratidza kurwadziwa kwemunhuwo zvake. Kunyangwe Mambo David aive akapfuma monarch panguva yake, zvakadaro, iye anokoshesa hupfumi hwake hwese neupfumi kuva pasina chero nguva ari pamberi paIshe. Akaziva chokwadi chekuti aive murombo uye anoshaiwa, uye aida rubatsiro kubva kunaIshe.
Mambo David akataura kuti Mwari mubatsiri wake uye mununuri, uye anomirira kuna She kuti anunurwe zvakakwana. Nenzira imwecheteyo, isu tinogonawo kuchema kuna iye ari kubatsirwa kwedu iyezvino, kunyanya munguva yekushayiwa, uye angatibatsira.
Ona kuti kushandiswa kwe "Zvangu" mundima 5 pamusoro. Izvi zvinoratidza kuti kuponeswa, kununurwa, uye nekuda kwenyaya iyoyo, zvipo zvese kubva kuna Mwari ndezve munhu mumwe nemumwe. Ichi chisarudzo chatinofanira kuita chimwe panguva chatinoda uye tinoda Mwari muhupenyu hwedu.
Patinoshandisa Rino Pisarema
Patinonzwa kushushikana mumoyo medu uye tariro yese ichiita sekunge yakarasika senge hapana nzira yekubuda, sekufanana nevhesi yokutanga tinoona kuti David aive achiudza Mwari kuti vakurumidze kumununura, zvinoreva kuti akagumbuka uye haana tariro zvakare.
Kana zvaunoda zvichikurumidza, uye iwe uchida, uye zvinoita sekunge hapana mumwe munhu wekumhanyira kuna kubatsirwa
Chero iwe paunofunga kuti muvengi ari mushure mekudonha kwako kubva panzvimbo yakakwirira
Paunenge wakavhiringidzika uye pasina munhu akakukomberedza kuti akubatsire kana kukunyaradza
Ah Mwari nhasi imbomhanya kununura uye kundisunungura kubva mune zvese zvinonetsa hupenyu hwangu muzita raJesu
Oh Lord, simuka mwedzi uno kurumidza kundibatsira muzita raJesu.
Zvese zvinotsvaga kutsvaga mweya wangu, iwe murevi wenhema, shungurudzika nhasi muzita raJesu.
Muzita raJesu, ndinobvisa chishuvo chose chakaipa nekuronga kundikuvadza nekundinetsa; hauzobudirira muzita raJesu.
Baba, mwedzi uno, ndipeiwo chishamiso chinongo nyadzisa vese vanondinyomba uye kushandura kutuka kwangu kuti kuve nemhedzisiro muzita raJesu.
Oh ishe, Mwari wangu, pandinotsvaga, munondipa mufaro uye mufaro mukati memazuva ese ehupenyu hwangu munaJesu zita.
Previous nyayaPISAREMA 19 Zvinoreva Ndima Ndima
inoteveraPISAREMA 71 Zvinoreva vhesi neimwe
30 minamato YeKurumbidza uye Yekutenda
20 Hondo dzeMweya Minamato yeMatambudziko Emuchato
Mapisarema 23 Kunyengeterera Kwekudzivirira Uye Kudzivirira
Mavhesi gumi eBhaibheri Kunamata Patinoda Kuregererwa